काठमाडौंका सबै ठाउँमा सीजी नेट, ६ सय ४९ मै पाइन्छ महिनाभरको इन्टरनेट « Tech News Nepal
२०७९, ५ जेष्ठ बिहिबार |
काठमाडौंका सबै ठाउँमा सीजी नेट, ६ सय ४९ मै पाइन्छ महिनाभरको इन्टरनेट
शुक्रबार, पुस १६, २०७८
काठमाडौं । अबदेखि काठमाडौंका सबै ठाउँमा सीजी नेट जडान गर्न सकिने भएको छ । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेसँगै यस्तो सुविधा उपलब्ध भएको हो ।
सीजी नेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय पोखरेलले उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउन कम्पनी सक्षम भएको जानकारी दिए । यससँगै काठमाडौंबासीले चाहेको समयमा इन्टरनेट जडान गर्न सक्ने उनले बताए ।
सीजी नेटले ९ सय ९९ रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले पछिल्लो पटक मासिक ६ सय ४९ रुपैयाँमै ५० एमबीपीएसको सस्तो प्याकेज पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ प्याकेज पछि बजारमा माग बढेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सीजीले गत जेठदेखि काठमाडौंका सिमित क्षेत्रबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो । अहिले ग्राहक सङ्ख्या १० हजार नाघिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । सस्तो मुल्यमा तीव्र गतिको इन्टरनेट खोज्नेका लागि सीजी नेट सबैभन्दा उपयुक्त रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
काठमाडौं । के तपाईंले प्रयोग गरिरहेको राउटरमा यूएसबी पोर्ट भएको विचार गर्नुभएको छ ? यदि
काठमाडाैं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले बुधबारदेखि लागू हुनेगरि ३३
तपाईंकै कमजोरीले इन्टरनेट स्लो भइरहेको त छैन ?
काठमाडौं । इन्टरनेट स्पिड स्लो हुनुका पछाडि धेरै कारण हुन्छन् । तर भनेजति स्पिड नपाउने
मोबाइल टपअप गर्ने सबैलाई आज रू. ५५ सम्म क्याशब्याक दिँदै ईसेवा
अनलाइनमै निःशुल्क पाइन्छ हरेक तहका शैक्षिक सामग्री, तपाईंले फेला पार्नुभयो ?
रूसले बैंक खाता रोक्का गरेपछि मुद्दा हाल्ने तयारीमा गुगल
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट यस्तो देखियो चन्द्रग्रहण
लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि एमआईएस र ओएसएस सिस्टम बनाउँदै लगानी बोर्ड